🥇 ▷ Faahfaahin aad u muhiim ah oo ku saabsan Oppo Reno 2 ✅
Faahfaahin aad u muhiim ah oo ku saabsan Oppo Reno 2
Oppo Reno, oo door muhiim ah ciyaaray tan iyo markii la bilaabay alaabada casriga ah, ayaa muujisay astaamo sare. Oppo Reno 12x soo dhaweyn iyo 5G. Oppo waxay rabtaa inay ku xoojiso dhadhanka iyada oo leh alaab cusub.
Ilaa hada Oppo Reno 2aad Qaabka ayaa la siidaayaa. Si kastaba ha noqotee, qaabkan cusub wali ma uusan soo bixin wax macluumaad ah. Xitaa haddii loo soo bandhigay Hindiya 28-kii Ogosto, hay’addu waxay asturaysaa qaabkeeda. Laakiin maanta markii ugu horreysay faahfaahinta xiisaha lihi way soo daatay.
Oppo Reno 2 wuxuu ku wajahanyahay kamarad
Arrinta ka dhigtay waddamada Aasiya safka hore ee suuqa casriga waxay u badan tahay inay kamarad ku saleysan tahay. Gaar ahaan taleefannada casriga ah ee ay soo saartey shirkadaha sida Huawei kamarad guryaha Abaalmarino badan ayaa mahad leh.
Shirkadda Oppo waxay mar labaad dooranaysaa qaab la mid ah si ay u helaan ammaan la mid ah. Reno 2 20x zoom ayaa la doorbidi doonaa. Sidoo kale muraayadaha indhaha ee loo yaqaan ‘periscope lenses’ waxay bixin doonaan taageero muhiim ah. Moodeelka cusub wuxuu sidoo kale soo saari doonaa 6.5 AMOLED bandhigay iyo batari 3,915 mAh ah. Waxaan dhihi karnaa booska kaydinta sidoo kale si ballaaran ayaa loogu hayaa badeecadan. 8 GB Ram iyo 128 GB ama 256 GB oo kayd ah ayaa la heli doonaa.
Oppo Reno; 48MP, 13MP, 8MP iyo 2MP xallinta dareemayaasha ayaa u oggolaanaya qaadashada sawirro qoto dheer. gudaha Hindiya marka hore moodel ayaa si xor ah loogu qaybin doonaa dalal kale ka dib hordhaca. Miyaad u malayn in qaabkani uu u fidin doono taageero muhiim ah Oppo? Fikradahaaga waad nagula wadaagi kartaan qeybta faallooyinka.